ဂျပန် အမျိုးသားက မြန်မာ အမျိုးသမီး ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကို ပါးရိုက်မှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂျပန် အမျိုးသားက မြန်မာ အမျိုးသမီး ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကို ပါးရိုက်မှု
Posted by ရွှေဘိုသား on Feb 7, 2012 in Copy/Paste | 44 comments
ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် လေးပါ။ 28.1.2012 ရက်နေ့မှာ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းတာဝန်ယူနေတဲ့ ဟိုတယ်
စစ်ဆေးပြီး နှိုင်ငံခြားသား နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှုဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ကြောင့် ရဲ အရေးမပိုင်တဲ့
ကြာမှာ အမှု လာဖွင့်ရန် အကြောင်းကြားသောကြောင့် ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ကို ဟိုတယ်
ခုအဖြစ်အပျက်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ဒို့အမြင်မှာတော့ ကိုယ့် နိုင်ငံသား တစ်ယောက် ကိုယ်ထိ
လက်ရောက် ယစော်ကားခံရတာကို သုံးလေးရက် အချိန်ယူပြီး ရဲအရေးမပိုင်မှုလို့ကိုင်ထား
တာကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် ခုလို့ လူတွေပြောနေကြတဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးတွေ ပွင့်လာပြီ
ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးထဲမှာ တို့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အခွင့်
ဂျပန် တွေ ကလည်း ဒို့များတိုင်းပြည်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ပြုကျင့်သွားတဲ့ ပါးရိုက်၊ မုဒိန်း
ကျင့်လို့ ရတယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ကို အရိုးထဲထိ စွဲနေလို့များ ခုချိန် ထိ ဒို့ အမျိုးသမီးလေးတွေ
ကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက် စော်ကားရဲသေးတာလားရယ်လို့ ရင်နာနာနဲ့ တွေးမိပြန်တယ်။
ဒို့ များ သူများ တိုင်းပြည်မှာအလုပ်လုပ်ရတုန်း က ကျွန်သာသာပဲနေခဲ့ရတယ်။
ဒို့ များ သူများတိုင်းပြည်မှာ တိုင်းတပါးသားကို လက်နဲ့မပြောနဲ့ စွေကြည့် ရင်တောင် သံတိုင်
နောက်မှာ ဘယ်နှစ်ရက်လောက်များ နေရမယ်၊ အသက်နဲ့ ကိုယ် မြဲပါ့မလားရယ်ဆိုတာ
အဝေးရောက်နေကြ တဲ့ ဒို့မောင်နှမသားချင်းများ အားလုံး သိပြီးကြမှာပါ။
**** အခုဖြစ်ရပ်မှာ တိုင်းတစ်ပါးသားတွေရဲ့ စော်ကားမှု၊ အလိုတော်ရိ တွေရဲ့ မျိုးချစ်
စိတ် မရှိမှုတွေကို ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ပြီး၊ ပြုပြင် ပြောင်းလည်းသင့်တယ် ဆိုတာကို ၀ိုင်း
***** 28.1.2012 မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ……..
ဖတ်ရတဲ့ သတင်းကြားပြီး ဘယ်လိုတွေဖြစ်သလဲတော့ မသိဘူး စိတ်ထဲတော့ မကောင်းတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာဗျာ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ကျနော်တို့ဆီက ၀န်ထမ်းတွေက ဆက်ဆံရေးညံ့လို့ ဖြစ်ရတာလား ဘာ လားတော့မသိဘူး ဆက်ဆံရေး ညံ့လို့ဖြစ်ရင်တောင် ကိုယ်ထိလက်ရောက်အခုလို စော်ကားတာကို ဥပဒေ ကဒီလိုကြီး လုပ်လိုက်တာတော့ မကောင်းဘူး ကူးပြောင်းမယ်ပြောပြီးမှ ဖြစ်ပျက်တာတွေ များနေပြီ
ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ချိတ်ပိတ်ခံရတာ အခုလိုဖြစ်တာ မြောက်ကိုးရီးယားက စာေ၇းဆရာကို စော်ကားသွားတာတွေ မန်းမြို့က တရုတ်နဲ့ ဗမာတွေဖြစ်တာတွေ နည်းနည်းလေးတော့
အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး ဆီက ကူးတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ မူရင်းလင့် ကတော့ အောက်မှာပါ
မြန်မာနိုင်ငံကရဲတွေက ဒီအတိုင်းပါပဲ ၊ ကိုယ့်ထက်ပါဝါကြီးတဲ့သူဆိုရင်အရေးမယူရဲဘူး၊ ကိုယ့်ထက်နိမ့်
တဲ့သူဆိုရင်တော့ ချက်ချင်းအရေးယူမှာ ၊
အလကားနေရင်းတော့ ထမရိုက်လောက်ပါဘူး ။ပြုလုပ်တဲ့သူရဲ့အကြောင်းပြချက်သိရရင်ကောင်းမယ် ၊အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲလူမျီုးရေးစော်ကားမှုဆိုရင်တော့ ၊အနိုင်ကျင့်မှုဆိုရင်တော့ဂျပန်မှမဟုတ်ပါ ၊ဘာလူမျီုးဘဲဖြစ်ပါစေပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုရမယ် ။ဒါကရဲအရေးချည်းဘဲလို့ မယူဆသင့်ပါ၊ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့လဲသက်ဆိုင်တယ်။ တစ်ခုဘဲဆုတောင်းတယ်မိန်းခလေးဘက်ကမှန်ဖို့။
ရွှေဘိုသားရေ အစ်မလည်း မြန်မာပါပဲ ။ ဘယ်လိုအခြေနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လူမျိုးကို နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်က ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းမှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်တယ်ဆိုတာကို ခံပြင်းမိပါတယ် ။
အစ်မသာ အဲ့ဒီကောင်မလေးနေရာမှာဆိုလျှင်လည်း ကိုယ့်အသားနာအောင်လုပ်တဲ့ လူကို … တုန့်ပြန်မှု တစ်ခုခုတော့ ပြန်ပေးမိမှာပါပဲ … ။ သို့သော်လည်း ရွှေဘိုသားရေ …
ဒီပို့စ်ထဲမှာ ကောင်မလေးကို ဘယ်အကြောင်းနဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်သလဲဆိုတာမျိုး ရေး မပြထားတော့ .. စဉ်းစားရခက်နေတယ် … ဥပမာပေါ့လေ .. ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းက အခန်းက ဧည့်သည် ပစ္စည်းခိုးတာမျိုး ဆိုလျှင်တော့ .. ဒေါသစိတ်နဲ့ ပြုမှူကောင်းပြုမှုမိလိမ့်မယ် ..ဒါမှမဟုတ် … သေးငယ်တဲ့ အဆင်မပြေမှုလေးတစ်ခုကို ပုံကြီးချဲ့နေတာမျိုးဆိုလျှင်တော့ … ဒါဟာ အနိုင်ကျင့်ခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ .. ဒါမျိုးဆို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်ကွပ် အရေးယူသင့်ပါတယ် … ။
ဘယ်သူ့ဘက်ကမှ မလိုက်ပဲ ဖြစ်သင့်တာလေးတွေနည်းနည်းဝင်ပွားချင်ပါတယ် … ။ အစ်မတို့တွေ ဒီလို အမှုခင်းမျိုး မကြုံဖူးတော့ သူ့ပရိုစီဂျာ ဘယ်လိုသွားရသလဲဆိုတာ အတော်များများ မသိကြဘူး .. ဒါ့ပြင် အမျိုးထဲမှာရော ၊ သူငယ်ချင်းထဲမှာပါ … အဲ့ဒီလို ကိစ္စတွေကို ပြောပြမယ့်လူမျိုးမရှိလျှင် ကြားဖူးနားဝ ဗဟုသုတဆိုတာ မျိုးမရှိတဲ့အခါ … ရဲစခန်းကို တိုင်ပေမယ့် ရဲစခန်းနဲ့ မပြီးဘူးထင်ပြီး အမြင်မကြည်တာတွေဖြစ်လာတော့တာပါပဲ … ။
ရဲစခန်းကပြောတာ ဟုတ်ပါတယ် … ။ ဒီတိုင်းလာတိုင်လို့ မရပါဘူး … ထိခိုက်နစ်နာအောင် လုပ်တယ်ဆိုလျှင် အစိုးရပိုင်ဆေးရုံက မှုခင်းဆရာဝန်တွေရဲ့ ဆေးစစ်ချက်နဲ့မှ ပူးတွဲ တိုင်လို့ ရတာပါ ။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ မဟုတ်ပါဘူး… အစိုးရကဖွင့်ထားတဲ့ ဘယ်ဆေးရုံမဆို … ဆေးစစ်ချက်ရယူနိုင်ပါတယ် … ။ မှုခင်းဆရာဝန်တွေက ခံရသူကို သေချာစွာ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုပြီး … ဘယ်အစိတ်ပိုင်း ဘယ်လောက် ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးရေးသား ပေးပါလိမ့်မယ် … သူတို့ရဲ့ ရေးသားချက်ပေါ် မူတည်ပြီး ရဲစခန်းမှာ အမှုသွားဖွင့်ရတာမျိုးပါ … ။ စခန်းကနေ ညှိလို့ ၊ တဖက်နဲ့ တစ်ဖက် မကြေအေးဘူး ဆိုလျှင်တော့ တရားရုံးထိ တက်ကြရပါတယ် …. ။အဲ့ဒီအခါ .. ဖြစ်စဉ် အစဆုံးက ပါဝင် ပတ်သတ်သူတွေ အားလုံးနဲ့ .. ဆေးစစ်ချက်ရေးပေးတဲ့ မှုခင်းဆရာဝန်တွေပါ … ထွက်ဆိုချက်ပေးရပါတယ် ။ ရုံးချိန်းကလည်း ခဏခဏ သွားရပါတယ် …. ။ တရားရုံးရောက်လျှင်တော့ အမှုကို ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်ရပါတယ် … အဲ့ဒီအချိန်မှ နှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းတာတို့ ကြေအေးတာတို့ လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး .. လူ သိရှင်ကြား ကြားနာရပါတယ် … အဲ့ဒါက သူတို့ လုပ်ထုံးပါ … ။
ဒီကိစ္စက အကြောင်းရင်းမှန်ကို မသိရပဲ ..ပါးရိုက်ခံရတယ်ဆိုတာသာ သတင်းကြီးနေတာမို့ … အရိုက်ခံရတဲ့ အကြောင်းလေးပါ ပူးတွဲသိမှသာ …. စာဖတ်သူတို့ ဝေဖန် ပိုင်းခြား သုံးသပ်နိုင်မှာပါ … ။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလာပြိး ကိုယ့်လူမျိုးကို အနိုင်ကျင့်တာမှန်နေလျှင်တော့ …. ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ် … ။
ပြည်လမ်း မှာ ယခင်သံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းမြ ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားလူုအခွင့်အရေးကော်မရှင် ရှိပါတယ်။ အနဲ့ ဆုံး အတွင်းရေးမှူးလုပ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးစစ်မြိုင်ရှိပါတယ်။ တရားဝင်သွားတွေ့ပြီးဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ကြီးရှိပါတယ်။ တွေ့ကြည့်ပါ။ ၀န်ကြီးမင်းများရဲ့ ကတော်တွေ ဘာပြောကြမလဲ။ ရဲအရေးမပိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ရဲအရာရှိ မှာ အမ၊ညီမတွေဘဲမရှိလို့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဆိုတဲ့ ဆင်ချင်တုံတရားများမရှိလေရော့သလား။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားကိုစော်ကားချင်းဟာ ကိုယ့် အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါးတာနဲ့မခြားပါဘူး။
အကြံပြုချင်တာရှိပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးဖြစ်ရင် ရဲစခန်းတန်းသွားပြီး ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ၇ာမှုနဲ့ပါတ်သက်ပြီးတိုင်ချင်တယ်ဆိုပြီးသွားပါ။ ရဲ့စခန်းကပုံစံနဲ့ ဆေးရုံကိုပို့ပါမယ်။ ဆေးရုံကဆရာဝန်က ဒါဏ်ရာပေါ်မူတည်ပြီး။ simple (or) grievous hurt မှတ်ချက်ပြုပါမယ်။ ဒါက ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးနဲ့သွားမဲ့ လိုင်း။ နောက်…တရားမမှုအနေနဲ့တရားစွဲပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေကောင်စီကိုဦးတိုက်လျှောက်ပြီး ရှေ့နေ ရှာခိုင်းပါ။ အဲ့ဒီလိုင်းကနဲနဲ သိမ်မွေ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေပြီး ဂျပန်သံရုံးကို တရားဝင်တိုင်ကြားစာပို့ပါ။ နောက်ဆုံးတခုကတော့ media နဲ့ interview လုပ်ပါ။ ဒါပဲ…။ သမ္မတဆီ တိုင်စာပို့တာထက်အများကြီးခရီးရောက်တာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ ပါးရိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး…
အောက်က e-mail တွေက ဟိုတယ်၊ ခရီး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ mail တွေပါ
by name နဲ့ တိုင်ရင်အရေးယူပေးပါလိမ့်မယ်
mo.moht@mptmail.net.mm နဲ့ mohtmail@gmail.com
ငါလည်း စိတ်ထိန်းနေတာကြာပြီ အရင်စိတ်နဲ့သာဆို အကုန်မသာပေါ်ကုန်တော့မယ်
မြန်မာပြည်ကို နှိမ်ချခံနေရတာကို မကြိုက်ဘူး
တောထဲပြန်ပြီး လက်နက်ပြန်ကိုင်တာ နားအေးတယ်
ဘာလို့ ရဲ အရေးမပိုင်ရတာလဲ၊ ဥပဒေက အဲဒီလိုကြီးဖြစ်နေ သလား၊ကိုယ့်နိုင်ငံသားကို ကာကွယ်ရမှာလေ၊
နေခဲ့ဘူးတဲ့စင်္ကာပူမှာဆို စင်္ကာပူ အမျိူးသမီးတယောက်က သူ့ကိုနှောင့်ယှက်တယ် ယူဆရင် လမ်းပေါ်ရှိ
တဲ့ ရဲ ကိုတိုင် နိုင်တယ်၊ အဲဒါဆိုရင် အဲဒီလူဟာ ဘာမှ အကြောင်းပြခွင့်မရှိ၊ ဒီက စကားနဲ့ ပြောရင် -စခန်း
ရောက်မှ ရှင်းပဲ၊ နှောင့်ယှက်တယ်လို့အတိုင်ခံရသူက နိုင်ငံခြားသားဆိုလို့ကတော့ ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပိုပြီးရှင်းဘို့ခက်ပြီ၊ အဲဒီလို ကာကွယ်ထားတာ၊
မှတ်ချက်တခုမှာမေးသလို ရိုက်ရတဲ့အကြောင်းများရှိသလားဆိုတာ သိစရာကိုမလိုတာပါ၊သူမက လွန်ရင်တောင် ကာယကံမြောက်မဖြေရှင်းပဲ ပါးစပ်နဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ်၊
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာသွားပြီး သူလွန်လို့ဆိုပြီး ပါးရိုက် လို့ကတော့ကိုယ်မှန်နေတောင် အနဲဆုံး ကြိမ်ဒဏ်ရမှာပါ၊
ကျွန်တော့အသိမြန်မာအမျိုးသမီးတယောက်မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲ သူ့ယောင်္ကျား ဂျပန်ကနှိပ်စက်လို့သွားတိုင်တာ ရဲက ဒီလိုပဲ ပြောပါတယ်၊ ဆေးစာ လိုတယ်လိုပြောပါတယ်၊ဒါဆို ဥပဒေမှားနေပါပြီ၊ ဥပမာပေးရရင်-အမျိုးသမီး လက်ဆွဲတာကို လက်ရာပြနိင်မှ အရေးယူပေး မလိုဖြစ်နေပြီ။ မိတ်ဆွေက အမျိုးသမီးရေးရာ သွားတော့လဲ ဂျပန်မို့ မလွယ်ဘူးပြောပြန်တယ်၊
ဂျပန်အစိုးရဆီက အကူအညီ မရမှာ ၊ငြိုငြင်မှာ စိုးနေတာလား၊ အဲဒါကြောင့်ဂျပန်မ ကိုအဓမ္မပြုတဲ့အမှူ၊ဟိုးအရင် အင်းယားလိပ်မှာ ဂျပန်တယောက်အသတ်ခံရမှူတို့တုန်းကမိမိ နိုင်ငံသားတွေကို
လျော့ပေါ့မစဉ်းစားပေးပဲ သူတို့အားရအောင် သတ်ပြနေတာလားမသိ၊
ဘာလုပ်ပြပြ ပြည့်ပြည့်ဝဝ အကူအညီက ဒီလိုလုပ်ပေးရုံနဲ့မရနိုင်၊
ကိုယ့်နိုင်ငံသားမှ မကာကွယ်နိုင်ရင် ဘာ အစိုးရဖြစ်ဖြစ် အလကားပဲ၊
မမ etone ပြောသလိုပါပဲကိုရွှေဘိုသားရေအရိုက်ခံရတယ်ဆိုတာ
ဆေးစာယူပေးခဲ့ရပြန်ပါတယ်…လို့ဆိုထားတော့ ခုဆက်တရားစွဲဘို့ လပ်နေပါသလားသိချင်ပါတယ်..
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ဘာတို့အကြောင်းကြားအကူအညီ တောင်းရင်ကော ပိုမကောင်းဘူးလား..
စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ တရားစွဲလို့ ရပီး ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ပေးနိုင်ပါစေ..
အမျိုးသမီးရေးရာတို့ ..ဂျော်လကီးရေးရာတို့ဘယ်ဂျောင်ရောက်နေလဲ
အရေးမပါတဲ့ ၀ီစီမှုတ်ဖို့ ပဲ စဉ်းစားနေကြတယ်..ချီးထုတ်တွေ
ကိုယ့်လူမျိုးပါးရိုက်ခံရတာတောင် မခံချိမခံသာ ဖြစ်နေရတာ…
သူရို့ ဂျပန်မကြီးကို မုဒိမ်းကျင့်တုန်းက သူရို့ လဲ ဘယ်လောက်တင်းကြမလဲနော့.
မြန်မာပြည်မှာစစ်မှန်တဲ့ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းဖော်ထုက်ရဲတဲ့ ပြည်သူလူထုကိုတကယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေနဲ့သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေရှိသင့်ပြီ
ဘယ်လိုကစဖြစ်တာလဲ မပြောထားဘူးနော် တခုခုမှားနေပုံဘဲ
(၁) ရဲတိုင်တယ်ဆိုကတည်းက ၀န်ထမ်းမဟုတ်တာ ၊ ဥပမာ ..ဧည့်သည်ပစ္စည်းခိုးတာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး ။ ဧည့်သည်ပစ္စည်းခိုးတယ် ဆိုရင် management ကလည်း တိုင်မပေးတဲ့ အပြင် ထပ်ရိုက်ပြီးတောင် အလုပ်က ထုတ်ပစ် (သို့) သူ့ကို ရဲလက်အပ်မှာပါ။ ဒါကြောင် ပစ္စည်းခိုးတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။
အခြား အမှားတစ်ခုခု ကျူးလွန်မိတာ ၊ ဥပမာ .ချိန်းထားတာ ရှိလို့ wake up call ခေါ်ခိုင်းတာ မခေါ်မိတာ၊ ဂျပန်ငတိ ကောင်မလေးခေါ်လာတာ လက်ခံလို့ မရဘူး ငြင်းပယ်တာ :grin: စသဖြင့် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ။
(၂) သာမာန်အားဖြင့် အများအားဖြင့် ဟိုတယ် ၀န်ထမ်းသော်၎င်း ကျွန်တော်တို့ အမျိုးကောင်းသားသမီးများသည် ၄င်း ၊ နိုင်ငံခြားသားများဆိုလျှင်လိုသည် ထက်ပင်ပို ချိုသာကြပါသည် ။ ထို့ကြောင် ၀န်ထမ်းမှ မခြေမငံဆက်ဆံရန်မှာလည်း အတော် လည်း နည်းပါးပါတယ် ။ သို့သော် လုပ်ခဲ့သည် ဆိုပါက လည်း ပါးရိုက်သည်တော့ မဖြစ်သင့်ပါ။
(၃) ကူညီပါရစေ ဆိုသော ရဲများနှင့် တကွ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန တာဝန်ရှိသူ အများစုသည် နိုင်ငံခြားသားနှင့် ပါတ်သက်လာလျှင် လွန်စွာ လက်ရှောင်ကြပါသည် ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဘာမှ မရဘဲ မှားခဲ့လျှင် ပြုတ်သည့် အထိ ဖြစ်သွားနိုင်သော ကြောင့်ဖြစ်သည် ။ နောက် စကားလည်း မပေါက်ကြ ကာ ခွေးအ ကြီး လှည်းနင်းဖြစ်မှာ ကြောက်ကာ အတတ်နိုင်ဆုံး ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ကြသည် ။
(၄) ဟိုတယ်ခ မရှင်းနိုင် တိုင်လိုရာတိုင် ဟု ပြောသော နိုင်ငံခြားသားများ အား သွားရောက်တိုင်တန်းပါလျှင် ရဲက လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးသို့ တိုင်ပါဟုပြောသည် ။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးက ဟိုတယ် ခရီးသို့ တိုင်ပါဟု ပြောသည် ။ ဟိုတယ် ခရီးက ရဲကို တိုင်ပါဟု ပြောသည် ။ နောက်ဆုံး ဟိုတယ် ပိုင်ရှင် ခင်မျာ ဟိုတယ် ခ မရသည့် အပြင် သူ့ ဟိုတယ် မှ အမြန်ဆုံးထွက်ရန် လေဆိပ်သို့ ပါ အိတ်စိုက် လိုက်ပို့ ပေးရသည်။ ကူညီပါရစေ ဆိုသော ရဲ များက အရိပ်အယောင်မျှပင် လာပြခြင်းမပြု ကြပါ။
(၅) ကျွန်တော် ကြားဘူးသမျှ သိသမျှကတော့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် တိုက်ခိုက်ပါက ရဲတွင် တိုင်ကြားနိုင်ပါသည် ။ ဆေးရုံ ဆေးစာ ယူခိုင်းပါသည် ။ ရဲနှင့် မဆိုင်ဟု ငြင်းပယ်လို့ မရပါ ။ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်သော ကြောင့် မကိုင်ရဲသော ကြောင့်ဖြစ်ပါမည် ။
(၆) အခြားနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်ခွင့် ရက်ကျော်လျှင် နေထိုင်သူ နိုင်ငံခြားသားမှာ ရဲဖမ်းခံရမှာ ကြောက်ကြရပါသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရဲများကတော့ သွားရောက် အကြောင်းကြားလျှင်သော်မှ အထက်မှာလို လူဝင်မူတိုင် ၊ ဟိုတယ် ခရီးတိုင်နှင့် တွန်းထုတ်ကြပါသည် ။ နိုင်ငံခြားသားများ လေဆိပ်ရောက်မှ တစ်နေ့ သုံးဒေါ်လာ ပေးကာ အေးအေးဆေးဆေးထွက်နိုင်ပါသည် ။ ဤမျှ သဘောကောင်းသော ကျွန်တော်တို့၏ ပြည်သူ့ရဲများဖြစ်ပါသည် ။
၀င်သာ အာချောင်လိုက်တာ ။ သတင်းကတော့ မသိဘူး ဓါတ်ပုံ က မှန်ရဲ့လားလို့ ။ လက်က တစ်မျိုးကြီးဘဲ ။ ဖိုတိုရှော့နဲ့ ပြင်ထားသလိုဘဲ ။ :grin:
ကိုထူးဆန်းပြောသလိုပေါ့“ဂျပန်ငတိ ကောင်မလေးခေါ်လာတာ လက်ခံလို့ မရဘူး ငြင်းပယ်တာ စသဖြင့် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ။”
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခုကိစ္စမှာ ဓါတ်ပုံကလဲ တွေဝေစရာ ဖြစ်နေတယ် ဗျ။တကယ်ကို လွဲမှားနေတာ တစ်ခုခုရှိနေမယ်ထင်ပါတယ် ကို
ဒီသတင်း အမှန်ဆိုရင်တော့ တော်တော့်ကို ဒေါသဖြစ်စရာ ကောင်းတယ်ဗျာ။
ဘယ်နေရာ စားပေါက်ရှိလဲဆိုတာကိုပဲ သွားရည်မြားမြား လျောက်သွားနေတဲ့ကောင်တွေ။ ကိုယ့်နိုင်ငံသူကို နိုင်ငံခြားသားက ပါးရိုက်လိုက်တာကို စာအုပ်ကြီးအတိုင်း တသွေမတိမ်း လုပ်မယ်ပေါ့။ ကိုယ့်လူမျိုး တစ်ယောက် မီးမလင်းတဲ့ ဓာတ်တိုင်အောက် ထိုင်နေတာကိုကျတော့ မှောင်ရိပ်ခိုမှုနဲ့ ဖမ်းမယ်ပေါ့။ “ကူညီပါရစေ” … တဲ့။ အဲဒီဆိုင်းဘုတ် ဘာမှမဟုတ်တာ ကျုပ်ကိုယ်တွေ့ပဲ။ ဇာတ်တူသားပဲ စားတတ်တဲ့ကောင်တွေ၊ အဲဒီလိုကောင်တွေကြောင့် ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်ကြီး နလံမထူနိုင်တာ။
ပြောပြန်ရင်လည်း အောင်ပွ လွန်ရာကျဦးမယ်
ခိုင်မာပါပြီ ဆိုပါတော့( ဘာ့ကြောင့်ရိုက်တယ် ) ဆိုတာ အတော်အရေးကြီးတဲ့ ကီးတစ်ခုလို့
ဒီတော့ ကျုပ်တို့ကြိုးစားရမှာက ဘာ့ကြောင့်ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုပါ
ဘာကြောင့်ရိုက်တယ်မှန်းမသိဘဲနဲ့ ကိုယ်ထင်ရာပြောရတာ မနိပ်ဘူး
သဘောအရကတော့ ယောက်ျားက မိန်းမကို ရိုက်ခွင့်မရှိရပါဘူးလို့တော့ထင်တာဘဲ ( အထင်ပါ )
အမျိုးသမီးက သူ့ကို မော်တာကြီးနဲ့ သွားချိန်တယ်ဆိုရင်တော့
ပြောလို့သာပြောတာဗျ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံသူတစ်ယောက် ပါးအရိုက်ခံရတာ
အပေါ်ကဆရာကြီးပြောသလိုဘဲ ဂျပန်မကြီးကို ဆိုင်ကယ်ဆရာကြီးက ဟိုဒင်းပြုလိုက်တဲ့
အကြောင်းကလည်း၇ှိသေးတယ် ဒါပေမယ့်အဲ့ဒါက သပ်သပ်ဘဲနော
အဖျဲခံခြင်လို့ရေးတယ် အပိုင်း ( ၁၁ )
ဘကြီး FR ရဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေက အတွေ့အကြုံလေးတွေ နဲ့ ယှဉ်တွဲဖေါ်ပြတဲ့
တစ်ခုရှိတာက ပါးရိုက်ခံရတဲ့ သက်သေအထောက်ထားကတော့ ယုတ္တိတော့အရှိသားဗျ
ဒါကလည်း ကျုပ်တို့ခေတ်နောက်ကျနေတာလေး သိခွင့်ရတာပေါ့ဗျာ
ဟိုတစ်လောကတောင် ဘယ်သူလဲ ဟော်တယ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးက
သူ့ကိုပွဲကြမ်းပါတယ်ဆိုပြီးလုပ်လို့ ဘလိုင်းကြီးအကျယ်ချုပ် ရက်ပိုင်းလောက်ကျခံလိုက်ရတဲ့
ဘဏ်ဥက္ကဌလား ဘာဥက္ကဌ ဆိုလား နာမည်တောင် တော်တော်ကြီးသွားတာဘဲ
ဘာ့ကြောင့် ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလေး ကြိုးစားပေးကြစေလိုပါကြောင်း
ရွာသားတွေ ပြောကြသလိုပဲ ဘာကြောင့်ရိုက်တယ်ဆိုတာက ကီး ဖြစ်နေတယ် ဝေဖန်ဖို့အတွက်
သတင်းရဲ့ အကျိုးအကြောင်း သိရရင် တင်ပေးပါ့မယ်ဗျာ
ကျနော်လည်း ဖတ်ပြီး နည်းနည်း မခံချင်ဖြစ်သွားတယ် ဒါ့မို့ တင်ပေးလိုက်တာ အပေါ်က အစ်ကိုတို့ပြောသလို သူ့အလှည့်တုန်းက မုဒိန်းကျင့်ခံရတာ သေသွားရတာဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်
ဂျပန်ခေတ်က အဲဒီလို အနိုင်ကျင့်ခံရပြီး သေသွားတဲ့ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးလို့ထင်တယ်ဗျာ
အခုဟာက ဥပဒေက နိုင်ငံခြားသားတွေကို ပျူငှာတာထက် လွန်နေပြီ ကြာရင် မြန်မာတွေ နိုင်ချင်သလို နိုင်လို့ရတယ်လို့ ထင်ကုန်မှာ ကြောက်ရတယ်
CCTV Camera နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားတာ မို့ သူကြီးရေး ဗီဒီယိုကလစ်ကလေး ရမယ်ဆိုရင်
ယူပြီး ဂျပန်ဒိုင်းယက်ကို (တိုကျိုက သူကြီးဘော်ဘော် ဆရာတွေကတဆင့် တင်ပေးပါလား)။
ဒါမှမဟုတ် အဲန်အိပ်ခ်ျကေ ကို ပို့ဗျာ။ “သိ” အောင်တော့ အနည်းဆုံးလုပ်ပေးရမယ်ဗျို့။
ဂျပန်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ဟိုတယ်ထဲကို ပြည့်တန်ဆာခေါ်မရလို.ဟန်.တားသည့်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းမြန်မာအမျိူးသမီးတစ်ဦးကို ပါးရိုက်မှုဖြစ်ပွား။
Credit to http://www.yeyintnge.com/2012/….._3310.html
ရန်ကုန်မြို.၊ အမှတ်(၉)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို.နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့်Orchid ဟိုတယ်တွင် လာရောက်တည်းခိုနေသူ ဂျပန်နိုင်ငံသား MR.OKAHASHI( Passport No: TH 119820 ) ကိုင်ဆောင်သူသည်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၈)ရက်ည(၁၁)နာရီခန်.က ပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးကိုခေါ်ဆောင်လာသဖြင့် စစ်ဆေးမေးမြန်းသည့်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းမြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သူ မအေးအေးကြည်(Front Office Supervisor and Guest Rellation Officer at Orchid Hotel Yangon )(managent of SG)အား၊ ရိုင်းစိုင်းစွာပြုမှြုေ့ပာဆိုပြီး လူအများရှေ.တွင်ပါးရိုက်ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်စော်ကားသဖြင့်ကာယကံရှင်မှထိရောက်စွာအရေးယူပေးပါရန် သက်ဆိုင်ရာသို.တိုင်ကြားရာဗီဇာဖြင့်ဝင်ရောက်လာသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အမှုဖွင့်မရပါဆိုသဖြင့်……….
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲမှူးကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအရှေ. ပိုင်းခရိုင်ရဲဒေသမှူး၊မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ. တို.ထံ အဆိုပါဟိုတယ် လုံခြုံရေးတာဝန်ခံဦးကျော်သမြင့်မှ ထပ်ဆင့်တိုင်ကြားခဲ့ရာ ( ၃၀-၁-၂၀၁၂) နေ.တွင် ၂၉၄/၃၅၄/၃၂၃ဖြင့်အမှုဖွင့်ထားကြောင်းသိရပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်လို. မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးက ပြောကြားရာတွင်” အဲဒီနိုင်ငံခြားသားက ဟိုတယ်ကိုသူပိုက်ဆံပေးနေတာဆိုပြီး ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောတဲ့အပြင်အခန်းသော့ကိုဆွဲလုတာမျိုးတွေလည်း လုပ်ခဲ့တယ်၊ ကျွန်တော်တို.၀န်ထမ်းကိုလည်းကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားတာကို CCTV ကင်မရာနဲ.မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ အထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ မြန်မာလူမျိူးတစ်ယောက်ကို နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်ကိုယ်ထိ လက်ရောက်စော်ကားတာမျိူးကတော့ ကျွန်တော်တို.အနေနဲ. ဘယ်လိုမှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဧည့်သည်ကိုအိမ်ရှင်က စော်ကားခွင့်မရှိသလိုအိမ်ရှင်ကို လည်းဧည့်သည်ကစော်ကားခွင့်မရှိပါဘူး။
ကိုသစ်မင်းရဲ့ ဖိုရမ်က ကူးယူပေးလိုက်ပါတယ်။မမြင်ဘဲနေမှာစိုးလို့ ပါ။
ကျုပ်တို့တွေ အရေးဆိုဘို့ တာဝန်ရှိလာပြီဗျို့
ကြည့်ရတာ မတ်စတာကြီး တော်တော်တင်းနေပုံရဒယ်
ဝိတ်လျှော့တာ လျှော့ဖို့ အဖော်မတွေ့ လို့ ၊ကတောက်ကဆနဲ့ စကားများကြ
မြန်မာပြည်မှာ မှားမှား မှန်မှန် ပြည်သူလူထုက ရဲစခန်းကို အမှုသွားဖွင့်ရတာမျိုး မလုပ်ချင်ပါဘူး ။
ဘာမှန်းညာမှန်းမသိပဲ အကြောင်းရင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိပဲနဲ့ ဘာထင်မြင်ချက်မှ မပေးတာကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။ Green Rose အကြံပေးရရင်တော့ သတင်းတစ်ခုကိုပေးချင်ရင် တတ်နိုင်သရွေ့ အကျိုးအကြောင်း ပြည့်စုံအောင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ လူဆိုတာက အကုန်မမြင်ရင် လိုရာဆွဲတွေးတတ်ကြတာလေ.. အခုကိစ္စကတော့ ၀န်ထမ်းက မှားနေသည်ပဲ ဖြစ်ပါစေဦးတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်တဲ့ ဂျပန်အမျိုးသားကရဲ့ လုပ်ရပ်ကလွန်ပါတယ်။ နောက်တစ်ဖက်က ပြန်တွေးကြည့်ရင် သူ့တိုင်းပြည်၊ သူ့လူမျိုးရဲ့ သိက္ခာကို သူချသွားတာပါ။ သူတို့ဂျပန်လူမျိုးတွေက ပါးရိုက်တာ အလေ့အထများဖြစ်နေလားမသိပါဘူး၊ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖက်ဆစ်ဂျပန်အကြောင်း ဖတ်ခဲ့ရသမျှတွေထဲမှာ အဲဒီ့ပါးရိုက်တဲ့အကြောင်းက တွဲလျက်ပါနေကျနော်။
အရိုက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်နော်. .. သတင်းပေးတာ နာမည်ကလွဲနေတာလား? ဓါတ်ပုံရဲ့ အပေါ်မှာ ရေးထားတာက အရိုက်ခံရတဲ့ ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးလေးရဲ့ နာမည်က မြတ်သိန်းခိုင် လို့ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်က အတိသဉ္စာနာဂရချစ်သူ ရဲ့ comment ထဲမှာကျတော့ မအေးအေးကြည်လို့ဖေါ်ပြထားတယ်။ ဘယ်လိုမှ အရေးယူလို့မရရင်တောင် အဲဒီ့ဂျပန်ကိုသူ့လုပ်ရပ်ဟာ အလွန်အောက်တန်းကျသောလုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း စာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးပို့သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကြည့်ရတာ ရိုက်လိုက်တာကတော့ သေခြာသလောက်ရှိမလားဘဲ
ပြည်ပမှာအနှိမ်ခံရတာက တစ်မျိုးပေါ့ ခုဟာက ကိုယ့်အိမ်မှာ….
ကျွန်မတို့ သတိထားရမှာက လူတစ်ယောက် သည် ကောင်းပါက နိုင်ငံသား အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည် ဟုတွေးသင့်ပါတယ်။
ဆိုးပါက နိုင်ငံသား အားလုံး ကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါ လို့တွေးသင့်ပါတယ်။
လူမျိုးတိုင်း၊ နိုင်ငံတိုင်း မှာ ကောင်းသူ၊ ဆိုးသူ တွေ ဒွန်တွဲနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက် မကောင်းတာနဲ့တော့ ကျန်တဲ့နိုင်ငံသားတွေ ကို မပုတ်ခတ် သင့်ပါဘူး။
ဒီကိစ္စသာ အမှန်ဖြစ်ရင် မိန်းခလေး ရဲ့ အလုပ်တာဝန်ကို နှောက်ယှက်ရုံမက ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်သူစော်ကားသူ မို့ ထို ဂျပန်သည် လုံးဝကို မှားပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံး ကို အကြောင်းကြားပြီး စိတ်ဆိုးစရာ ဖြစ်ပေမဲ့ သံရုံးနဲ့ ပြေပြေလည်လည် ပြောဆို ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီနေ့ခေတ်ဂျပန်လူမျိုး တွေဟာ တော်တော်များများ (ကျွန်မ သိသလောက်) အရမ်းယဉ်ကျေးပါတယ်။
အမှန်တရား ဖြစ်အောင် သူတို့ လုပ်ပေးမယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။
အေးလကွာ…မြတ်သိန်းခိုင် ခလေးမ ရုပ်ကလေး လှကလှပါဘိနဲ့ သနားနေတာ ရဲရင့်ငယ် ဘလော့ထဲကျတော့ အေးအေးကြည်ဖြစ်နေတယ်။ မြတ်ခလေးလိုပဲ ရုပ်လေးချောရဲ့လား သိရင်ပြောဂျပါအုံး။။
ခူးရာဘတ်ကဲရိုးလုပ်သွားတဲ့ ဂျပွန်နွားသိုးကို ဝိုင်းဆဲရမယ်။ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့် ဘာညာကွိကွအော်နေတဲ့ ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေ ဒါမျိုးကြတော့ ဘာလုပ်နေဂျသလဲ။။။ ပုံစံကြည့်ရတာ ဂျပန်ကကျွေးမဲ့ ဆူရှီထမင်းလိပ် မျှော်နေဂျတယ်ထင်၏။ ဂျပန်မှာ ယဉ်ကျေးနဲ့ အရိုင်း နှစ်မျိုးရှိဒယ်။ လူရိုင်းတွေက ဘီယာသောက် ကိုဘေးနွားစားတယ်။ အဲဒီနိပွန်လဒလည်း ကိုဘေးနွားကင်စားသုံးသူဖြစ်မယ်။
တခုသတိပေးချင်တာ ဂျပန်တွေက ကာမအရမ်းသောင်းကျန်းတယ်။ (လူမျိုးတိုင်းတော့ ဒါနဲ့မကင်းဘူး၊ သို့သော် ဂျပန်မှာ အဲဒီဟာကိုကို အလေ့အကျင့်အနေနဲ့ ရှိခွင့်ပြုထားလို့ တချို့ကိစ္စတွေမှာ စည်းလွတ်ဝါးလွတ်ဖြစ်တယ်။ မဖြစ်ခင် သတိပေးတာနော်၊ ဆန့်ကျင်တယ်ပြောဘူး။ ကြောင်ကြီးလည်း လောကီသားပေမို့ ) ဟိုတယ်မိုတယ် ဖျော်ဖြေဧည့်ခံရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ဂျပန်တွေဝင်လာရင် အညှီအဟောက်ဖက် လွှမ်းဖို့များပြီသာမှတ်ပေတော့။ ထိုင်းမှာအဲသလိုပဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျုပ်တို့ အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေကလည်း နဂိုထဲကမှ ယိုင်ချင်ချင်နဲ့တော့ အတော်ပဲ။။
ရွာထဲမှာ တလောက ဂျာနယ်လစ်ဖြစ်ချင်လို့ အသိအမှတ်ပြုကတ်ပြား ထုတ်ပေးပါ ပြောသူတွေ ကာယကံရှင်များကို သွားမိတ်ဆက် ဒါမှမဟုတ် နီးစပ်ရာကို အင်တာဗျူးလုပ်ကြပါလား။ ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေ ပါးစပ်ပိတ်နေတုန်း ကိုယ်ကအခွင့်အရေးယူပြလိုက်…။
အဲလေ ဗရာဗို !!
ဒါက ပုံစံ ကခနဲ့ တရားရုံးကိုရေးတင်ရပါတယ်။ရဲအရေးမပိုင်ပေမယ့် ရဲကဆောင်ရွက်ရပါမယ်။
သက်ဆိုင်ရာသံရုံးကိုလည်း ရဲကပဲ ဆက်သွယ်ပေးရမှာပေါ့။
တရားလိုကတော့ အမူဖွင့်ရမယ်၊တရားစွဲရမယ်။ ခက်တာက သတ္တိပဲ။ ပြန်သာရိုက်ထုတ်
အဲ့ ဒီက မြန်မာတွေက ဘာလို့ သွေးကြောင်တာလဲ ငဘ၀တ္ထုထဲမှာမိနီက်ို ဂျပန်က မုဒီမ်းကျင့်တာ
ဘယ်လောက်ရက်စက်လည်း။ ဒီကောင်ကို တွယ်လိုက်ရမှာ၊ အချင်းချင်းသွေးမနီကြဘူး ။
တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေဆို ဒေါသထွက်ရင် တကယ်နှက်တာနော်
အစိမ်းလိုက်တောင်ဝါးစားချင်တယ်ဆိုလား။ ဒီကောင်မလေး ဂေဇက်က မမတွေဆီ သင်တန်းတက်သင့်တယ်၊တောက်…ငါရှိလို့ကတော့… ရှမ်းတရုတ်သိုင်းအကြောင်းပြရတာပ။
ဒီသတင်းကြီးက သဟာကြောင့် အတည်ပြုသတင်းအဖြစ်ထွက်မလာသေးတာကိုပါ
ကိုယ်မေကိုယ်လိုးတွေ….လီးပဲ…နိုင်ငံခြားသားဆို ဖင်တုန်အောင်ကြောက်တဲ့ကောင်တွေ…
အဲဒီ ငလမသ ဂျပန်ကြီး၊သူများနိုင်ငံလာပြီး ဖင်လာယားတဲ့ ဂျပန်ကြီး ကမကလကြီးကို ပြန်ပြီး သောက်ခွက်ပြန်ရိုက်ရမှာ
ခေးမ ခမျာ သနားစရာ..
စီးပွားေ၇းတိုးတက်ဖို့ အခြေအနေကောင်းတွေနဲ့.. တိုးရစ်ဇင်နဲ့လူတွေသန်းချီလှိမ့်ဝင်လာတော့မဲ့.. မြန်မာပြည်ဟာ.. ဒီလိုကိစ္စကို.. သတိထားကိုင်တွယ်သင့်တယ်..။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းသစ်တွေနဲ့.. ၀င်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအတွက်.. စအရှိန်ယူနေတဲ့..အချိန်မို့ပါ…။
အမှန်ကတော့.. ဂျပန်လူမျိုး၊ မြန်မာလူမျိုးဆိုပြီး ခေါင်းစည်းတင်ရေးကတည်းက သိပ်တော့ မဟုတ်သေးဘူး..။ အင်တာနက်၊ဖေ့စ်ဘုတ် အင်အားနဲ့.. လူမျိုးရေးဆွထုတ်ပြီး.. ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တခုခုလုပ်တယ် ထင်မိတယ်..။
ယောက်ျားတယောက်က မိန်းမတယောက်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်တာနဲ့ .. ကမ္ဘာ့ဥပဒေအရကို.. ရာဇ၀တ်မှုမြောက်ပါတယ်..။
ကာယကံရှင်က..ကျူးလွန်သူကို တောင်းပန်ခိုင်းပြီး နစ်နာခတောင်းလိုက်ရင် ပြီးတယ်ထင်ပါကြောင်း…။
(ကျုပ်သာ ပါဝင်ပါတ်သက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့.. အခုအခြေအနေနဲ့.. ၅သောင်းလောက် တောင်းခိုင်းတယ်.။ ရတဲ့ ငွေထဲကတ၀က်ကို.. ထိုင်းနယ်စပ်မှာ..ဘ၀ ဘ၀တွေ.. စော်ကားခံနေရတဲ့..မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို ကူညီနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုခုကို.. လှူခိုင်းလိုက်မယ်..)
သဂျီးက ခလေးမဂုဏ်သိက္ခာကို ငါးသောင်းနဲ့တန်ကြေးဖြတ်မလို့ လားဂျ
အူးကြောင်ကြီးရေ သဂျီးကို လာပြောပါဦး
အဲဒီနယ်စပ်မှာ နေကြတာလည်း ..မြန်မာတွေပါပဲ.. ဆရာပေါက်ပေါက်ရယ်…။
အရွယ်ကောင်းမိန်းကလေးတွေ.. သူတို့တွေ.. ဘာဖြစ်နေကြလည်း သိချင်သလားဟင်င်င်… :?
ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းမိန်းကလေးနေရာမှာ Phaung Phaung သာဆိုရင် ကိုယ့်အသားကိုလာထိတဲ့သူ ဂျပန်နိုင်ငံသားကို ကုတ်ဖဲ့ပစ်လိုက်မယ်..အသားနာသွားလို့ကတော့ ဘာမှမမြင်တော့ဘူး…နောက်ဆုံးမနိုင်ရင် ကုန်းကိုက်ပစ်မယ်..ဟင်း ဟင်း ပြောရင်းတောင်ဒေါသတွေထွက်လာပြီနော်…. ကိုယ့်နိုင်ငံကိုလာတဲ့ဧည့်သည်က လူပါးဝတာ..
စည်းကမ်းမဲ့ယဉ်တိုက်မှု့တစ်ခုမှာ ဝိုင်းသမတဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကလေးတွေကို
သက်ဆိုင်တဲ့ ညီမငယ်လေးတွက်ဝမ်းနည်းမိပါတယ် အဖြစ်မှန်ဆိုလျှင်ပေါ့
ဒါပေသိ ကျုပ်တို့ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေ၇ှင်းကြဘို့တော့လိုမှာဘဲ
သက်ဆိုင်တဲ့ ဟော်တယ်အနေနှင့် အဲ့သည် ညီမငယ်လေးတွက်
သဂျီးမင်းကို ကပ်ဖါး ယပ်ဖါးလုပ်ပြီး ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်
( သူပါးအရိုက်ခံထားရတာ ဟိုကိုလှူပါ ဒီကိုလှူပါ ဆိုတာမပါ )
ဒါနဲ့ ကျုပ်ကို ပါးရိုက်နားရိုက်လုပ်ခြင်သူတွေရော ရှိကြပါသလား
တစ်ချက် = ဘီအီးသုံးလုံး နှစ်ချက် = ငါးလုံး
ဗီဇာနဲ့လာလို့ အမှုဖွင့် မရပါလို့ ပြောထားတာလေးတွေ့လို့မန်းလိုက်အုံးမှပါပဲ
ကျုပ်တို မြန်မာတွေ ဗီဇာနဲ့လာသူတွေကိုေ၇ှာင်ရမလို ဖြစ်နေပြီ
မတော် ပါးရိုက်သွားမှ တိုင်မရတောမရ ဖြစ်နေအုံမယ်
ဥပဒေမှာ မည်သူမဆို လို့ပါတယ် ဗျ
””မည်သူမဆို လက်ရောက်မှုကို ကျူးလွန်လျှင်”’ ………..
ဟုတ်ကဲ့  အမှုဖွင့်အရေးယူလို့ ရပါတယ်
နိုင်ငံခြားသားပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်သား ပဲဖြစ်ဖြစ်
အရိုက်ခံရသူမိန်းခလေးအနေနဲ့ အရင်ဆုံး ရဲဆေးစာနဲ့ ဆရာဝန်မှတ်ချက် ယူရပါတယ်
သာမာန်နာကျင်စေမှုလား ဒါသိရအောင် ဆရာဝန်ရဲ စစ်ဆေး ချက်ကိုယူတာပါ
ပြီးရင်တော့ ရဲအရေးပိုင်ရင် ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ပါ
ရဲအရေးမပိုင် ရင် ပုံစံ (ကခ) နဲ့ ရဲက တရားရုံးကိုလွဲပြောင်းပေးပါလိမ်မယ်
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုရှိတာက ရဲဆိုတဲ့ လူတွေဟာ
အဲလို နိုင်ငံခြားသားတို့ စစ်သားတို့ဆိုရင် လက်ရှောင်ကြတာများပါတယ်
အဆင်ပြေအောင်နားချရင်နားချ နားမချ ရင် ဟိုဟာအကြောင်းပြ
တစ်ကယ် အမှုဖွင့်လိုတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဘာမှ နားမယောင်မကြောက်ပါနဲ့
နိုင်ငံခြားသားကိစ္စကတော့ တရားရုံးက လေဆိပ်အထွက်တားတာတို့
မိမိဘက်က သူပါးရိုက်တာ ကိုမြင်တဲ့သက်သေ အခိုင်အမာ နှစ်ဦးခန့်ရှိပါစေ
စီစီတီဗွီ မှတ်တမ်းကို တရားရုံးမှာ တင်ပြနိုင်ဘို့ တောင်းယူထားပါ
ကာယိနဒြေ ပျက်စေ လောက်တဲ့ အကျီင်္ပြဲတာတို့ ကိုခန္တာကို ကိုင်တွယ် လှုပ်ရမ်းတာတွေဆို
အလုပ်ရှင် တရုပ်က စာရေးမကိုပါးရိုက်ဆောင့်တွန်းလို့
အမှုဖြစ်ကြတဲ့အခါ အဲဒီ အလုပ်ရှင် ထောင်ခြောက်လကျပြီး
ရာသက်ပန် ဗီဇာ အပိတ်ခံ ရတဲ့ အမှု တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်မျက်မြင် ကြုံ ဘူးပါသဖြင့်
ကိုယ်ကမှန်နေရင် မကြောက်ပါနဲ့ ဆက် လုပ်ပါ
“”မည်သူမဆို “”” လို့ပါပြီးသားပါ
**လူကိုသင်းကွပ်ခြင်း မျက်စိ ကွယ်စေခြင်းအမြင်အာရုံချွတ်ယွင်းစေသည်ထိနာကျင်စေမှု
**လူကို နားမကြားရအောင် အကြားအာရုံချွတ်ယွင်းစေသည်အထိ နာကျင်စေမှု
**လူ၏ကိုခန္တာချွတ်ယွင်းစေခြင်း ချိ့နဲ့သွားသည်ထိ နာကျင်စေမှု
**ဦးခေါင်းတစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်စေခြင်း မှတ်ဥာဏ် ပျက်ယွင်းစေခြင်း
**သွား ကို ကျိုးပဲ့စေခြင်း
**ရက်ပေါင်း နှစ်ဆယ်တိတိ မိမိ လုပ်ငန်းများအားလုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်နိုင်လောက်အောင်
ယူအာရှိလို..ယူချိလို..အာချီနိုမိုဒို သကြားမုန့် ဖက်ထုတ် ငလမဂျပန်ကြီး လပ..လပ
ခွေးမသားဂျပန် ….ဘိရုမာ ခူရခါး..ဟီရိုတထာ အိုးထိုးထာကဲ…..နီပွန်နီပွန် အာချီနိုမိုတို ဆန်ညို။
ဘိရုမာ ဆိုတာ.. ဗမာ လို့ ဂျပန်သံနဲ့ ပြောတာဗျ
(သောက်ရူး ဗမာ) ဖြစ်သွားတယ်နော်
NHK တို့လိုဂျပန်ရုပ်သံလိုင်းတွေကို CCTV ရိုက်ထားခဲ့ရင်လဲပို့ပြီး နောင်မစော်ကားရဲအောင်အသိပေးသင့်တယ်ဟုထင်မြင်ယူဆမိပါကြောင်း
အရိုက်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးတွက် ဘာတွေလိုက်လုပ်ပေးသလဲသိဘူးနော
အဲ့လိုအမှုကိုရဲက မကိုင်ဘူးဘူးဆိုတော့ ဘယ်လိုဟာမျိုးများ ကိုင်လဲ သိချင်လိုက်တာ
သြော်…….. ရွာကကောင် ဂျပန်မသွားကလိတုန်းကတော့ သူတို့ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်လဲ ??
့မြန်မာနိုင်ငံက အသေကောက်တွေရော ဘယ်လိုအမှုရှင်းခဲ့လဲ ??
အချိန်က အဝေးကြီးမဟုတ်သေးဘူး မမေ့လောက်ပါဘူးနော် ………
(စီးပွားေ၇းတိုးတက်ဖို့ အခြေအနေကောင်းတွေနဲ့.. တိုးရစ်ဇင်နဲ့လူတွေသန်းချီလှိမ့်ဝင်လာတော့မဲ့..
မြန်မာပြည်ဟာ.. ဒီလိုကိစ္စကို.. သတိထားကိုင်တွယ်သင့်တယ်..။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းသစ်တွေနဲ့.. ၀င်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအတွက်.. စအရှိန်ယူနေတဲ့..အချိန်မို့ပါ…။)
တော်ဘီတော်ဘီ …တခုပဲ မန့်တော့မယ်…
လူအချင်းချင်း ပါးရိုက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ..